”Taariikhdii Noleedkii Shiikh Cumar Faaruuq oo dhameystiran” Inaa Lilaahi Wa inaa ileyhi raajicuun | WELOME AL-BADAR CHANNEL YOUTUBE
WELOME AL-BADAR CHANNEL YOUTUBE
ALBADAR CHANNEL YOUTUBE
HALKAAN KA DAGSO DHAMAAN CASHIRADA BISHA RAMADAAN
← War Deg Deg Ah Inaa Lilaahu Wa inaa ileyhi Raajucuun “Sheekh Cumar Faaruuq oo ku geeiriyooday dalka Sacuudiga”
Geeridii Sheekh Cumar faaruuq Duco Qolka Altaqwaa Center paltalk →
”Taariikhdii Noleedkii Shiikh Cumar Faaruuq oo dhameystiran” Inaa Lilaahi Wa inaa ileyhi raajicuun
Waxaa shabakada Somalimirror.com soo gaartay taariikhdii Rabbi ha u naxariistee Shiikh Cumar Xaaji Cabdisuldaan oo xaley ku geeriyooday wadanka Sucuudiga, waxaana halkan idiinkugu soo gudbineynaa taariikhdii Shiikha oo dhan.
Sheekh Cumar Faaruuq Xaaji Cabdi-Suldaan Xaaji Maxamuud wuxuu ku dhashay
degmada Qooxley oo Qallaafe iyo Qabri daharre u dhaxeysa, halkaasi oo magaceeda caanka ahi yahay “Carmaale” .
Waxa uu dhashay sida la sheegay goor barqo ah, maalin Khamiis ah, xilli deyr ah, laakiin si cad looma hayo bisha iyo sannadka.
Carmaale waxa dariiqa diimeed ka hayey aabihiis Xaaji Cabdi-Suldaan, dariiqadaasoo. ka koobneyd dugsi Quraan oo uu hayey wadaad la oran jirey macallin Cusmaan Macallin Dhicis, iyo cilmiga oo isagu uu akhrin jirey.
Sheekh Cumar-Faaruuq wuxuu ka dhashey qoys diimeed. Hooyadiis, Caasha Sheekh Axmed Guure, isaga oo 3 jir ah ayey geeriyootey, aabihiisna wuxuu ka dambeeyey saddex sano. Isagoo weli la gudin baa Aabbihii dhintey.
Waxaa markaa Sheekh Cumar Faaruuq soo koriyey ayeeyadiis hooyo iyo walaalihiis ka waa weynaa. Sheekha dugsiga qur’aan, dugsigii 1aad wuxuu galey isagoo 5 jir ah, dugsigii labaad isaga oo 9 jir ah. Macallinkiisu wuxuu ahaa abtigii hooyadii la dhashay oo macallin Xuseen Sh. Axmed-guure la yiraahdo. Dugsigaasaa isagoo 12 jir ah uu Quraanka Kariimka ku dhameeyey.
Markaa Qur’aanka Sh. Cumar-Faruuq 3 goor buu dhameeyey. Ka dibna isagaaba macallin-dugsi noqdey, markaasoo uu 14 jir ahaa. Mar wuxuu ku qabtey dugsi magaalada Qallaafe isaga oo kutubta raacda oo xer ah, una dhiga carruurta reerkii uu markaas uu la noolaa. Reerkaasi oo uu lahaa nin la yiraahdo Olol Diinle, waxay saaxiib ahaayeen aabahiis. Dugsigii labaadna wuxuu u qabtey niman reer Ugaas la yiraahdo, meel la yiraahdo Maraacaato. Dugsigaas labaadna ardey badan baa kasoo aflaxdey oo waa uu kiciyey.
Sheekh Cumar Faaruuq Cilmiga isaga oo 14 jir ah ayaa Fiqiga loo billaabay, Kitaabka Safiinatu Salaat ayaa waxa u billaabay Shiikh Cusmaan-Jire Sh. Xuseen-Dhaqane.
Dhinaca luqadda Carabiga guriga ayaa loogu akhrin jirey, niman walaallihiis ah oo ay ka mid yihiin Sh. Shaafici Xaaji Cabdi-Suldaan iyo Sh. Murshid ayaa si toos ah ugu akhriyey Naxwaha, Ajruumiga, Camriidiga, Mulxaha, Mutamimka, Qadriga iyo ilaa Alfiyaha. Qaybta Sarfiga waxaa u akhriyey wadaad awowgiis ah oo la oran jirey Xaaji Maxamuud Xaaji Cabdulle, Tafsiirka waxaa u akhriyey wadaad la dhihi jirey Sh. Yuusuf muddadaasoo uu magaalada Qallaafe xer ku ahaa.
Cilmiga Xadiiska ayuu markaa nin Sh. Ibraahim Muxumed Cali (Sh.Ibraahim Suuley) ka akhristay. Dabadeed Cumar-Faaruuq wuxuu galey madrassa ku taalley Xamar oo la oran jirey “Machadu-Diin bil-Muqdisho” oo ay Masaaridu dhigi jirtey. Halkaasi waxa uu ku dhameeyay dugsiga dhexe.
Dugsiga sare waxa uu ku dhameeyay Machad-Altadaamun al Islaamiyah bil-Muqdisho oo ku yaalay xaafada KM-4, waxaana maamuli jiray Sucuudiga. Kadib waxa uu galay Jaamacadda Medina, kulliyadda “Al-Dacwa wa-usuula-Diini”, markaasoo taariikhdu ahayd 1975, wuxuuna ka qalin-jabiyey 1979kii.
Sheekh Cumar Faaruuq Jaamacadda markii uu dhameeyey waxa uu bilaabay faafinta diinta Islaamka isagoo xaruntiisu tahay Sacuudiga. Waxa uu duubay cilmi fara badan oo ay ka mid yihiin kutubo badan oo ilaa iyo 12 kitaab ah oo tafsiirka ah iyo siirada oo dhowr kitaab ah, manhajul-Muslim, taysiirul-aclaam, Arbaciinu-Al-Nabawi iyo kutub fara badan oo noocaas ah intii uu joogey Sucuudiga. Kutubadaas ayaa gaarey Yurubta iyo Ameerikaba. Kutubtaas dartood baa dadkii ku noolaa dibedda ay jecleysteen inay arkaan, markaasoo uu 1993kii bishii July 12keedii uu Shiikhu tegay dalalka Sweden, Norwey, Danmark, Finland, Swizarland, Ingiriiska oo uu ka sameeyay muxaadaraad iyo duruus kaleba.
Kadib sannadkii 1996 ayuu ku noqday Soomaaliya, waxaanu tagey magaalooyinka Muqdisho, Marka, Qoryaaley, Afgooye, Wallaweyn, Buurhakaba iyo Baydhabo.
Sheekh Cumar Faaruuq intii ka dambaysay burburkii Soomaaliya waxa uu waday barnaamij ballaaran oo ka kooban seddex qaybood. Kan hore waa midaynta culimada diinta ku abtirsada, mid mid ama xisbi xisbi ha ahaadeene; Kan labaad (Tawjiihul Uzucamaa) la talinta iyo toosinta ragga qabqablayaasha ka ah siyaasadda Soomaaliya; iyo qaybta seddexaad (Tadqiiful-Ummah) oo ah waxbaridda ummadda Soomaaliyeed, oo siduu sheegay Shiikhu “goorahan dambe Ilaahay hanuun siiyey” sidii looga haqabtiri lahaa diinta, hadday tahay akhriska kutubta ama wacdi iyo waano.
Sheekh Cumar Faaruuq wuxuu ahaa mufti ay ay ixtiraamto bulshada Soomaaliyeed, waxqabadkiisuna uu ka muuqdo dalka gudihiisa iyo dibeddiisaba, iyadoo cilmigiisa dunida oo dhan laga wada raacdo. Dalka Sucuudiga oo uu degganaa tan iyo 1974kii, waxa uu si toos ah uga akhrin jiray kutubta, kuwaasoo cajaladaha laga duubo muxaadarooyinkiisa ay soo gaari jireen dunida inteeda kale.
Laba goor ayuu Soomaaliya tegay Sheekh Cumar Faaruuq, halkaasi oo uu ka bilaabay tafsiir xaafadda km 4, duruustaasi oo maqal iyo muuqaalba laga duubay si mar walba loo isticmaalo faafiddooduna u fududaato.
Waxa uu islamarkaa Jimcayaasha jeedin jiray muxaadaro looga kala yimaado Muqdisho iyo magaalooyinka ku hareeraysan sida Afgooye, Marka, iyo Qoryoolay. Tirada ka soo qaygasha dhagaysigiisa waxa lagu qiyaasay 4000 oo qof markiiba, iyadoo celcelis ahaan ay 1500 oo ka mid ahi haween yihiin.
Sheekh Cumar Faaruuq waxa uu leeyahay 13 carruur ah iyo afar xaas, iyadoo ubadkiisa iyo kuwa ay sii dhaleen ay gaarayaan dhowr iyo labaatan.
Sheekha ayaa maanta ku geeriyoodey Sacuudiga, waxaan leenahay Ilaahey janadii fardowso haka waraabiyo. Qabrigiisana ha u waasiciyo .Anagana Allow bacdigii hana fideyn… AAMIIN
By AL-BADAR CHANNEL YOUTUBE ISLAMIC
KHUDBO # CUSUB NIMCOYINKA ALLE OO LAGU SHUKRIYO SH MAXMED CABDI UMAL 16.04.2016
SU’AALO IYO JAWAABO CUSUB SH MAXMAD CABDI UMAL 2016
MUXAADARO CUSUB FISQIGA 1 AAD SH MUSTAFE X ISMAACIIL 2016
new1 MUXAADARO CUSUB IN AAD NOQOTIT QOF HAMI SARE QEETBA 1-2 SH MUSTAFE X ISMACIIL 2015
MUXAADARO CUSUB CIBAADOOYINKA FADLIGA BADAN SH MUSTAFE X ISMAACIIL 2015
NEW SU’AALO IYO JAWAABO SOONKA SH MAXMED CABDI UMAL 20.06.2015
MUXAADARO CUSUB AXKAAMTA SOONKA SH SHIBLE 18.06.2015
NEW CASHIRADA BISHA RAMADAAN CASHIRKA 1AAD SH M DIRIR 2015
MUXAADARO CUSUB KAALAYA AAN SAACAD RUMAYNEE ALLAAH SH ABDIRASHIID 2015
NEW REER GALBEEDEYNTA IYO KHATARTA AY U LEEDAHAY GABADHAHA MUSLIMI SH MUSTAFE
MUXAADARO CUSUB IN QOYSKA MUSLINKA AH LAGA ILAALIYO FIKRADAHA KHALDAN 16.01.2015
Sideen ugu hiilinaa Nabiga s c w Sh maxamed Umal Khutbah 16 1 2015
BISHAARO BISHAARO NEW VIDEOS AL-BADAR CHANNEL YOU TUBE ISLAMIC
MUXAADARO CUSUB WEYNAANTA NABIGA SCW SH MUSTAFE X. ISMACIIL 30.06.2013
MUXAADARO CUSUB MUXAMADU RASULULAH SCW SH MUSTAFE XAAJI ISMAACIIL
NEW SU”AALO IYO JAWAABO CUSUB OO KU SAABSAN EE BISHARA RAMADAAN
XAGEE AY MARAYSAA XAALADA SOMALIYA MAANTA SH MAXAMED CABDI UMAL 14-06-2013
MUXAADARO CUSUB CIBAADURAXMAAN SH MUSTAFA X ISMAACIIL 25/4/2013
SU’AALO IYO JAWAABO CUSUB OO MUHIM U AH DUMARKA SH MAXAMED CABDI UMAL 2013
MUXAADARO CUSUB ZINADA SHEKH SAID RAGE XAIFDULLAH 7.4.2013
JUSTICE IN ISLAM SH MAXAMED SH CALI MAWLID 2013
MUXAADARO CUSUB LIMAANKA SH ABDIRASHIID SH CALI SUUFI XAFIDULLAH
Mu’tamarki Shouth Afrika Allaah Ayaa Idiin Doorta Muslimiin – Sh. Maxamed Cabdi Umal
MUXAADARO CUSUB QOR OO AKHIR SH MUSTAFE X. ISMAACIIL XAFIDULLAH 2012
Sheikh Sacid Rage ” THE WORLD OF JINN PART
CUDURADA QALBIKA KU DHACA IYO DAWADIISA DR CALI MAXAMED SAALAX
MUXAADARO CUSUB DADKA OO WANAAG LA DHAX DHIGO SH MUSTAFE X. ISMAACIIL 29.12.2011
******Al-BADAR CHANNEL ********
Kitaabka Siirada Nabiga Scw OO Dhameestiran 1-25 Cashir Sh Mustafa X. Ismaaciil
SU'AALO IYO JAWAABO SH CUMAR FAARUUQ RAXUMULAH
Haki Za Mke Kwa Mume. Naaswir Bachu 1 of 8 (Alhidaaya.com)
Abtirkii Nabiga (SCW)
SHARAFTA QOFKA MU'MINKA AH SH MAXAMED RASHAD RAXIMULLAH PATR 1 -2
''Taariikhdii Noleedkii Shiikh Cumar Faaruuq oo dhameystiran" Inaa Lilaahi Wa inaa ileyhi raajicuun
MUXAADARO " FURIINKA IYO AXKAAMTIISA SH MAXAMUUD SHIBLE 2010
TAARIKHADA TATAARKA 1-9 SH MUSTAFE XAAJI ISMAACIIL XAFIDULLAH
Muxaadaro " Maxaa Xiga Geerida Dabadeed " Sh Maxamed Rashaad Janadii Fordoowsa Alaha Kawarabiyo
Raadi Keedka Al-Badar Stereo
Maxaa Ka Cusub Al-Badar
AL-BADAR CHANNEL YOUTUBE ISLAMIC
MUXAADARO XUQUUDA NABIGA SCW SH MAXMED UMAL BY AL-BADAR CHANNE L
MUXAADARO CUSUB HOOYO SH MAXAMED KAARIYE
MUXAADRO MUHIM AH XUQUUQDA RASUULKA ﷺ ᴴᴰ┇ Sh Mustafa Xaaji ismaaciil 2015
SH MAXAMED KHADAR khaladaad la xiriira gurka iyo furiinka
Somali Islamic Links
KABARO QURAANKA KARIIMKA